LET’S GET TOGETHER TO STOP INSULTING A RELIGION !!!… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » LET’S GET TOGETHER TO STOP INSULTING A RELIGION !!!…
LET’S GET TOGETHER TO STOP INSULTING A RELIGION !!!…
Posted by etone on Jul 15, 2010 in News |6comments
ခွေးသူးတောင်းစား ..AKON အခွေတွေကိုတောင်ကြည့် ဖို့ တောင် မလိုတောဘူး..
ဒီသူတောင်းစားရဲ့ …အခွေတွေအိမ်မှာရှိရင်….ချီးတွင်းထဲသာ…လွင့်ပစ်လိုက်ကြပါ…စို့ ……
ဒီခွေးသူတောင်းစားစောက်ကုလာရဲ့အခွေတွေကို ကြည့် ဖို့ မပြောနဲ့ …….တင်သွင်းဖို့ တောင်..မသင့်ဘူး…
ဒီလို Buddha ဘာသာကို စော်ကားတဲ့ကောင်တွေ….အသေဆိုးနဲ့ သေမဲ့ကောင်တွေ……
ဒီကောင်က အဲမှာသူ့ ရဲ့ သီချင်းကို ရိုက်နေတာလေ. အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိုင်းနိူင်ငံက လူတွေတောင်
သူ့ ရဲ့ အခွေအကုန်လုံးကို လမ်းကြိတ်စက်နဲ့ကြိတ်ပစ်လိုက်တယ်လေ
တနိူင်ငံလုံးသူ့ အခွေတွေကို မကြည့်ရဘူးလို့ တောင် အမိန်
့ထုတ်လိုက်တယ်..မြန်မာနိူင်ငံက လူတွေကကော် ဘာလုပ်ကြမလဲ ?
ကျွန်တော်လဲဒီပုံကို ရှာနေတာကြာပြီ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပို့ ပေးလိုက်လို့ အခုလို ဝေမျှတာပါ။
— www.lwannaing.blogspot.com http://www.proxy-anonymizer.info/
LET’S GET TOGETHER TO STOP INSULTING A RELIGION !!!... ……………………
ထိုင်းမှာအဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့လုံးဝမကြားမိပါဘူး။ အခုလို လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကို လုပ်နေတဲ့ etone ဟာ အစိုးရစေခိုင်းချက်ကြောင့်လို့မြင်မိတယ်။ လူတွေကိုအာရုံ လှည့် တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေသုံးစမ်းပါကွာ။ ကျွန်တော်လက်ရှိနေ နေတာက ထိုင်းမှာပါ။ akon ကိုလဲဒီကလူတွေက လမ်းကြိတ်စက်နဲ့တက်ကြိတ်ဖို့နေနေ
ညဈေးတွေ နေမှာ နေရာတိုင်းမှာ ကြားနေရတာ သူ့သီချင်းတွေဘဲဆိုတာ လက်ရှိ ထိုင်းမှာ ရှိတဲ့လူတွေကိုမေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အခုလိုအစိုး အကြိုက်လုပ်၇ပ်ကိုတော့ ဒီ mandalaygazette user တွေအားလုံးဆန့်ကျင့်ဖို့ပြောကြားလိုတယ်။
စောက်ချိုးမပြေတဲ့အစိုးရရဲ့ပါတနာက ငါမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နှိမ့်ချပြီး ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ရအောင်လည်း ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေစိတ်ဓါတ်မနိမ့်ကျသေးဘူး ။ သိသလောက်သူများတွေကိုshare ပဲတာပဲရှိတယ် ။ တခြားဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိဘူး ။ မင်းမယုံလည်းအဲ့ဒီအခွေရှာဝယ်ကြည့်ကွာ ။ထိုင်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေကိုမေးစမ်းပါကွာ ။ ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေစိတ်မ၀င်စားဘူး ။ ငါတို့ဘာသာကိုတော့လာမစော်ကားနဲ့ ။ ငါတို့လည်း ဘယ်ဘာသာကိုမှ မကောင်းမရေးဘူး ။ ကုလားတွေအေးဆေးနေစမ်းပါလို့ပဲပြောချင်တယ် ။ မျိုးပြုတ်သွားမယ်မှတ် ။ ဒါနဲ့ မင်းကရော ဗုဒ္ဓဘာသာမှဟုတ်ရဲ့လား ။
ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်လို့သာ ဒီပို့စ်ကို တင်ပြပေးတာပါ….. ကျနော်လည်း နောက်ပို့စ်မှာ ပုံတွေ ဖေါ်ပြပေးထားပါသေးတယ်။
ထိုင်းမှာ အခွေတွေကို လမ်းကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ်တာကတော့ ကျနော်က ထိုင်းမှာနေတဲ့သူ မဟုတ်တော့ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သီရိလင်္ကာမှာ Akon လာဖျော်ဖြေမှာကိုတော့ သီရိလင်္ကာအစိုးရက ပြည်ဝင်ခွင့် ပိတ်ထားတယ်လို့ ကျနော်ကြားရပါတယ်….
Akon ကို အားပေးတာ၊ မအားပေးတာကတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါ။
ခင်ဗျားတို့ စိတ်ကို ကျနော်လည်း မပိုင်ပါဘူး…..
တခါတလေ ကျနော့်စိတ်တောင် ကျနော်မပိုင်ဘူး……
zeitgeistguy အနေနဲ့ မြန်မာဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ရှုတ်ချဖို့ မကောင်းပါဘူး….
ပြီးတော့ ကိုအီးတုန်းက ဒီမှာ ပို့စ်တွေ တင်နေတာ ကြာလှပါပြီ….
တကယ်လို့များ သူမဟုတ်တာလုပ်ရင် Mandalay Gazette က Admin တွေလည်း ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး..
ဟုတ်တယ် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် ဒီလိုမျိုးလုပ်ရက်တွေကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ်။
zeitgeistguy အဲ့ကောင်က ဘာကောင်လဲ
စောက်ရေးမပါတု့ကောင်ဘဲ Akon ကသူ့အမေလင်ဖြစ်နေလို့ပေါ့